Anwụ na-acha ezumike na Barbados | Akụkọ Njem
Anwụ na-acha ezumike na Barbados
Mariela Carril | | Barbados, Nduzi
Ọ bụrụ na ị banye n’ mbara ala ị ga-ahụ na mpaghara Oke Osimiri Caribbean enwere nnukwu otu agwaetiti na-ekpo ọkụ. Ha dị ọtụtụ! Enwere Barbados, agwaetiti nwere ọtụtụ anwụ, osimiri mara mma, ọdịbendị bara ọgaranya nke ukwuu ma n'oge a nnukwu ihe eji enyere ndị njem aka.
O nwere ike ọ gaghị abụ ebe mbụ na-abata gị n'uche mgbe ị na-eche banyere Caribbean, mana ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ, ebe ha na-adịghị asụ Spanish ma na-a drinkụ ọtụtụ rum, dịka ọmụmaatụ, Barbados abanye na Top 5. Ya mere, ka anyị lee ihe na-eche anyị na Barbados.
2 Akwadoro osimiri dị na Barbados
3 Ọrụ ndị njem ndị ọzọ na Barbados
Ọ dị na Antilles Nta, nke dị nso na Grenadines na Saint Lucia. Ọ bụ ezie na Columbus kwụgoro na ya na njem mbụ ya, ọ ghọrọ a UK ngalaba ma ọ bụ ezie na ọ nwetara nnwere onwe ya na 60s, ọ ka jikọtara ya na ya site na Commonwealth.
Isi obodo ya bụ obodo Bridgetown. Agwaetiti nwere obere 34 kilomita ogologo na 23 obosara. Ọ bụ agwaetiti dị ala na ebe kachasị elu ya karịrị mita 300 nke elu. Nwee ọmarịcha ebe okpomọkụ ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị ga-aga n’agbata June na Ọktọba ị ga-abanye ọtụtụ mmiri ozuzo. N'ezie, ọ bụ akụkụ nke mpaghara a wakporo ifufe na ebili mmiri dị ike n'oge ahụ n'afọ, ọ bụ ezie na ọ dabara na ọ bụghị na nsogbu nke agwaetiti ndị ọzọ dị na Caribbean.
Barbados ka na-emeputa shuga, ma ruo oge ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enweghị anwụrụ ọkụ nke njem nlegharị anya ejirila akụ na ụba ya: ọ na-enye ya osimiri, gị mmiri kristal, gị abaitiat inyocha, na ube-mgboroja, njeghari mmiri, ebe a na-eme golf ma na-ejegharị site na gị oge gara aga.
Akwadoro osimiri dị na Barbados
Iji nye gị echiche n'izu a, nkezi okpomọkụ na Barbados bụ 28ºC. Ihe obi uto. Ebe ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ na-enye mmiri dị jụụ na ụsọ osimiri aja ọcha. Gbanye Ebe Ọwụwa Anyanwụ hay usoro coral ebibi site na mmiri nke Atlantic na ike ifufe ya mere e nwere ọtụtụ ebili mmiri ebe a na-eme ikuku ikuku na sọọfụ. N’ezie, ọtụtụ kwenyere na ha bụ osimiri kachasị mma n’ụwa na-eme egwuregwu ndị a.
N’ebe ndịda ụsọ mmiri, mmiri dị jụụ n'ihi na coral coef na-echebe ụsọ mmiri ka ị nwee ike igwu mmiri na snorkel. N'ikpeazụ, n'ụsọ oké osimiri ndịda ọwụwa anyanwụ, a na-enwekwa ọtụtụ ọrụ na egwuregwu mmiri, osimiri aja aja pink na ọnụ ọnụ ugwu. Barbados nwere osimiri 60 n'ogologo na nkezi nke anwụ puku ọkụ 3000 puku awa. Abụọ nke a osimiri na-atụle mgbe Top 10 nke osimiri kacha mma n’ụwa: St. Parish na Crane Beach.
N'ebe ọdịda anyanwụ ụsọ oké osimiri ahụ osimiri ndị a kwadoro dị Mmadụ isii, Mullins, Gibbes na Reeds Bay. Osimiri aja ọcha bụ nke Paynes n'ọnụ mmiri. Ọzọ mara mma nke ukwuu bụ nke Heron n'ọnụ mmiri na na Osimiri Brighton enwere ndị na-eji anwụ anwụ na nche anwụ na ụlọ mmanya.
Na ndịda ọwụwa anyanwụ na ọwụwa anyanwụ ụsọ oké osimiri dị ka anyị kwuru na e nwere ifufe, ya mere, anyị nwere ike ikwu na Osimiri Crane. Ọ bụrụ n’inwere ego ịnọ na Crane Resort, ọ bara uru n’ihi na echiche dị ukwuu ma dị ala ma ị na-eji igwe mbugo gbagoo osimiri. N'okpuru Ọ bụ kaadị akwụkwọ ozi nke Caribbean: nkwụ, ọgba na ọnụ ọnụ ugwu, ha niile nwere aja ọcha na mmiri turquoise.
N'akụkụ ụsọ oké osimiri, n'aka nke ọzọ, bụ Carlisle n'ọnụ mmiri, nke dị ka ọnwa ọhụrụ site na Bridgetown ruo Hilton Hotel. Site na ebe a na-esite n’ọdụ ụgbọ mmiri dị obere karịa otu kilomita.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ otu ụbọchị n’èzí Osimiri Accra Ọ dị mma n'ihi na ọ nwere nnukwu ụlọ ahịa dị nso na ndị na-echebe ndụ ka ị nwee picnic ma nọrọ ogologo oge ịchọrọ.
Ọrụ ndị njem ndị ọzọ na Barbados
Barbados nwere nnukwu colonial gara aga yabụ ọ bụ akụkụ nke onyinye ndị njem. Mgbe ike gwụrụ gị maka osimiri ya, ịga ije n'okporo ámá ya. Ndi bekee batara na 1624 ya mere omenaala ebe a bu ite na-agbaze nke omenaala Britain tinyere omenaala North Africa.
Ndị bi na Barbados na-akpọ onwe ha Ha na-agbada. Ndị Bajan nwere ezigbo enyi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụrụ n ’ị na-asụ Bekee ị nwere ike ịmalite ịgwa ha okwu gbasara akụkụ niile nke agwaetiti a. Ọ na-abụkarị oji na enwere ndị ọcha dị ole na ole na owuwanyanwu. Bekee bụ asụsụ gọọmentị ma n'ezie nsụgharị mpaghara ahụ dị nnọọ iche n'ihi na ọ na-emetụta asụsụ ndị a na-ahụkarị na Caribbean.
Obodo ochie akụkọ ihe mere eme na Bridgetown Military Garrison bụ ihe nketa Worldwa ebe ọ bụ na 2011. Bridgetown nwere akụkọ ntolite azụmaahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ anọ nke ịzụ ahịa shuga na ndị ohu ka ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile gafere ebe a ma gosipụta ya na ụlọ Europe ndị ọzọ. Ọ na-eche na ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ iji mee ka ụzọ dị n'etiti Atlantic na ọnọdụ ya dị mma site na echiche ndị agha maka Alaeze Ukwu Britain.
Ọ bụ ya mere njegharị nke ụlọ ndị agha ya Ọ bụ njem a tụrụ aro nke ukwuu, n'etiti ụlọ mkpọrọ na ogige ndị agha. Ha nọ ebe ahụ, n'etiti ebe a na-azụ ahịa n'oge a, n'okporo ámá ndị mara mma, ahịa, ọmarịcha marina dị n'ime, ogige na plọg. E nwekwara ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ soụ yabụ na ị ga-enwe ohere nwalee rum. Ihe ọintụ pụ paireti dị mkpa! Na rum bụ ihe jikọrọ ya na shuga n'ihi ya, ọ bụkwa ihe ọ drinkụ theụ nke ndị Caribbean.
Ọtụtụ na-atụ aro nke ahụ Barbados bụ ebe ọmụmụ rum. Ihe a na-akọpụta shuga na-arụpụta site na ngwaahịa, molasses, nke, mgbe mmanya na-egbu ya mmanya ma gbanye ya, na-amịpụta rọm dị ụtọ. Rum bụ ihe pụrụ iche ebe ọ bụ na ọ na-apụ site na ihe ọ ofụ juiceụ nke shuga shuga, sirop ma ọ bụ molasses, ya mere enwere ọtụtụ. Cheedị na a na-akọpụta okpete ebe a kemgbe 1640, na na narị afọ nke 10, e nwere nnukwu ubi XNUMX nke aka ndị ohu na-amịpụta.
Ma taa ọ ga-ekwe omume ileta ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a na igwe ihe ha nke mepụtara shuga nke mechara zigara Europe ka ọ nụchaa. Ọ dị ka ihu igwe nke Barbados na-eme ka shuga ebe a bụrụ ezigbo mma yabụ shuga na rọm ahụ dị oke mma. Ọ bụrụ na akụkọ a na-amasị gị, ị nwere ike ịbanye maka otu n'ime njegharị rum ihe enwere: enwere otutu ihe omimi di ka Mount Gay Rum, Foursquare Rum Factory & Heriateg Park, St Nicholas Abbey Distellery ma ọ bụ West Indies Rum Destillery.
N'ikpeazụ, otu n'ime ihe ndị ị nwere ike ime ebe a bụ gaa na Brisitih Airways Concorde, edebe n'ime nnukwu ụlọ, na-egwu mmiri n'etiti mbe ma ọ bụ nọkwasị na submarines Atlantis Enwere ike ịme ya n'afọ niile ma hapụ gị ka ị hụ ka ụgbọ mmiri kpuru na nzuzo nke Atlantic. Ridegbọ njem ahụ dị nkeji 40 ma bụrụ ihe magburu onwe ya.
Agbọ elu n'etiti Spain na Barbados na-ewe ihe dị ka elekere asatọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Barbados » Anwụ na-acha ezumike na Barbados
7 eke saịtị na Europe agaghị agbaghara